Buy Satchels | School | Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Fampiononana rehefa mitafy
Ny kitapo dia mazava ho azy fa ny fon'ny fiandohan'ny sekoly rehetra. Na volomparasy, manga na mavo, miaraka amin'ny piramida na virjina, ny tena zava-dehibe dia ny saka toy ny zaza. Amin'ny maha-ray aman-dreny antsika anefa dia fantatsika fa ny optika rehefa mividy ranz dia ny antsasaky ny ady. Raha ny marina, tsy maintsy tafavoaka velona ny farafaharatsiny, fara fahakeliny, ny taona voalohany amin'ny sekoly voalohany.
Ny maso dia misokatra amin'ny fividianana vazy!
Tsy lazaina mihitsy hoe manana ray aman-dreny bebe kokoa ny fepetra takiana ho an'ny ankizy voalohany.
Inona no tadiavina rehefa mividy kitapo
Noho izany, raha efa nofinidin'ny zanakao ny nofinofiny nofinofisinao, dia tokony hanamarina ity modely ity amin'ny alàlan'ny fepetra voalaza etsy ambany. Ankoatra izany, tsy tokony hividy ny kitapon'ny zanakao tara loatra ianao, satria modely haingam-pandehanana haingana no namidy ary ny fahasosoran'ny zanakao dia tena lehibe tokoa!
Inona no tadiavina rehefa mividy ilay kitapo
Ny tena zava-dehibe dia voalohany amin'ny tombo-kase ankatoavina. Ny kitapo dia tokony hifanaraka amin'ny NORM DIN 58124. Izany dia miantoka fa ny sodi-vaovao dia sady tsy azo antoka, azo antoka ary azo antoka. Azonao atao ny mahafantatra ireo kiraro izay mahafeno io fenitra io, ny marika nomerika na ny tombo-kase TÜV.
Diniho koa ireo loko sy ny lokon'ny fluorescent. Mety mila manomboka amin'ny ririnina ny zanakao raha mbola matavy. Ny loko maizina tsy misy taratra dia tsy mahatsikaritra ataon'ny mpitondra fiara, noho izany dia tokony hanana an'io fiarovana io ny kitapo. Ny mpandinika dia mamerina ny hazavan'ny fiara ary manamarina fa hita mazava tsara ny zanakao. Ny lehibe kokoa sy ny lehibe kokoa ny taratra, ny tsara kokoa, indrindra raha ny saka dia tsy mavo mena na orange.
Pejy fanolorana / Takelaka fanangonana pejy
Mazava ho azy fa zava-dehibe koa ny mipetraka tsara ny kitapo, indrindra raha tsy maintsy mandeha any an-tsekoly mandritra ny fotoana maharitra ny zanakao na mandeha amin'ny bus. Matetika dia mavesatra loatra amin'ny fanaraha-maso ny vata-mangatsiaka, noho izany dia mety hiteraka olana sy mety hanimba ny fitondran-tena ratsy. Tokony ho farafahakeliny efatra ny lavaka ary ny tebiteby.
Ny kitapo ety amin'ny endriny hafa koa dia loharano manan-danja amin'ny fividianana akora. Tokony ao amin'ny faritra maromaro ao amin'ny vatana izy ary ho toy ny tady. Tsy tokony hiparitaka manerana ny faran'ny zaza ny saka.
Torohevitra momba ny fividianana sira
Tsara indrindra ny manao fitsapana ao amin'ny fivarotana amin'ny kitapo misy tahirin-tsakafo. Noho izany, ny zanakao dia afaka manombana tsara kokoa ny fomba fijerin'ny sombina feno amin'ny farany.
Sazina miaraka amin'ny paosin'ny rindrina sy ny rindrina mora
Raha toa ka manatanteraka ireo teboka voalaza etsy ambony ireo ny kitapo, dia fepetra tsara izany. Raha mbola misy poketrany ny kitapo voafantina dia tsy misy mahazatra ny fomba hividianana izany.
Ny paosin'ny sivana dia natao ho an'ny tavoahangin-drano. Satria tsy mitovy ny tavoahangy rehetra satria ny torolalana ampiasaina dia mahatonga antsika hino. Mba hisorohana ny tondra-drano amin'ny boky sy ny boky ary ny boky dia mbola maina sy madio, ny tavoahangin-drano dia tsy tokony hiorina ao anaty kitapo, fa any amin'ny paosiny ivelany.
Ny farany dia tsy misy lanjany akory ny hevitra Famaranana ny kitapo, Ny zanakao dia tokony afaka manokatra azy mora foana sy haingana, na dia mety hosedraina ao amin'ny fivarotana aza. Farany fa tsy ny kely indrindra, misy ny tena antony manosika fotsiny ihany - sambatra fa tsy misy fitsipika tokony harahina!
Sarin'ny pejy fanangonana